Myanmar | maungpeace
Posted on July 14, 2013	by maungpeace
မင်းနာမည် ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ ငြိမ်းချမ်း။ မိသားစု နာမည်ကော။ (family name) မရှိဘူး။ တကယ်… တကယ်ပေါ့။ ငါတို့ တိုင်းပြည်ကလူတွေ မှာ မိသားစု နာမည် မရှိဘူး။ (family name) အဲဒါပါပဲ။ မိသားစု နာမည် မရှိလို့ မင်းတို့ ယောက်ျား မိန်းမယူရင် အမျိုးတော် မတော် ဘယ်လို ခွဲကြလဲ ဆိုတာ မေးခံရတာလည်း အကြိမ်ပေါင်းမနည်းပါဘူး။ ငါတို့ ဒီလို ပဲ သိတာပေါ့ လို့ ဖြေခဲ့ရ ပေါင်းလည်း မနည်းပါဘူး။ … Continue reading →
Posted in opinion (ကိုယ်ယုံကြည်ရာ)	| Tagged Buddhist monks, Burma, first name, interfaith marriage prohibition law, last name, Myanmar	| Leaveacomment
Three reasons why Buddhist monks should not participate in power politics
Posted on July 7, 2013	by maungpeace
Power politics involves voting, electing the representatives and canvassing. Fact – 2008 Myanmar constitution barred Buddhist monks from voting in any election.* Some people may argue that it is not fair to bar “members of religious orders” from voting because … Continue reading →
Posted in opinion (ကိုယ်ယုံကြည်ရာ)	| Tagged Buddhism, Buddhist monks, monks, Myanmar, politics, religion	| Leaveacomment
Posted on June 1, 2013	by maungpeace
click for PDF file here ​လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတာ အများပိုင် ပစ္စည်းနဲ့ တူပါတယ်။ အခြားအများပိုင် ပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့ သန့်ရှင်းသောလေ၊ တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် အခမဲ့ ထုတ်လွှင့်ပြသသော မြန်မာ့အသံ နှင့် ရုပ်မြင်သံကြား၊ တစ်နိုင်ငံလုံး အတွက် အကာအကွယ်ပေးသော စစ်တပ် တို့ ဟာ သဘော သဘာဝ တူညီပါတယ်။ အများပိုင် ပစ္စည်းများရဲ့ သဘော သဘာဝဖြစ်တဲ့ မည်သူမဆို ရယူ သုံးစွဲပိုင်ခွင့်ရှိ ခြင်း၊ မိမိရယူ သုံးစွဲလိုက်သော ကြောင့် အခြား … Continue reading →
Posted in opinion (ကိုယ်ယုံကြည်ရာ)	| Tagged Burma, Human Rights, military, Myanmar, public goods, Rohingyas	| Leaveacomment
Myanmar: A revolution in progress
Posted on May 20, 2013	by maungpeace
Originally posted on Amanpour:
By Samuel Burke & Juliet Fuisz, CNN It is known as the Myanmar miracle. Or that is the hope for the country of almost 50 million people tucked between Asian powerhouses India and China. Just three…
Posted in opinion (ကိုယ်ယုံကြည်ရာ)	| Tagged Amanpour, Burma, interview, Myanmar, Thein Sein	| Leaveacomment
အမေရိကန် ပညာရေး တစိတ်တပိုင်း
Posted on May 19, 2013	by maungpeace
click here for PDF file ကျနော် ရေးမယ့် အကြောင်းအရာ က ထူးမဆန်းလေးပါ။ အရင် အရင့် လူတွေလည်း ရေးခဲ့ကြပြီးမယ် လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျနော် ကတော့ အဲဒီ အရင်ဟာလေး တွေကို မဖတ်ရသေးတဲ့ သူတွေ အတွက်ကော၊ ဖတ်ပြီးလို့ ကျနော် ပြောတာနဲ့ ဘာကွာ သလဲ ဆိုတာ နှိုင်းယှဉ်လို့ ရအောင် ဒီ အကြောင်းကို ရေးပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို ရေးတဲ့ အချိန်မှာ ဆေးတက္ကသိုလ် နဲ့ … Continue reading →
Posted in opinion (ကိုယ်ယုံကြည်ရာ)	| Tagged America, Burma, education, higher education, Myanmar	| Leaveacomment
မြန်မာပြည်က စက်ရုံ အလုပ်ရုံ အလုပ်သမားတွေ လစာတိုးမြှင့်ရေး ဆန္ဒပြကြတာ မြင်တော့ စိတ်မကောင်းဘူး။ သူတို့ တိုးတောင်းတဲ့ အခြေခံလစာဟာ တလ ကို သုံးသောင်းတဲ့ဗျာ။ ဒေါ်လာ ၃၇ ကျော်ကျော် ပေါ့။ ဒါတောင် ၈၀၀ ဈေးနဲ့ တွက်လို့။ ၁၀၀၀ ဈေးနဲ့ တွက်ရင် ၃၀ ဒေါ်လာဘဲ ရှိတယ်။ ပုံမှန် တနေ့ ရှစ်နာရီ လုပ်တဲ့ လခဟာ တနေ့ ကို တစ်ဒေါ်လာ သာသာ ဘဲရှိတယ်ဗျာ။ ကဲ ဒီလို … Continue reading →
Posted in opinion (ကိုယ်ယုံကြည်ရာ)	| Tagged Burma, labors, minimum wages, Myanmar, rights	| Leaveacomment
Posted on April 18, 2013	by maungpeace
For pdf file, click here http://db.tt/7Br6Sw35 ခေတ်နောက်ကျ နေတယ် ဆိုတဲ့ စကား မြန်မာပြည် နဲ့ အင်မတန် လိုက်ဖက်တဲ့ စကားပါ။ မြန်မာပြည်ဟာ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး က စလို့ အတွေးအခေါ်ပိုင်း၊ အသိပညာဆိုင်ရာ တွေ မှာ အရာရာ နောက်ကျနေခဲ့တာပါ။ အဲဒီလို နောက်ကျနေတာကို ပြင်ဖို့ မကြိုးစားကြပဲ အမျိုး၊ဘာသာ၊ သာသနာ အတွက် အမျိုးသား နိုင်ငံရေး လုပ်ပြီး တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင် လုပ်မယ် ဆိုတဲ့ အယူအဆ … Continue reading →
Posted in opinion (ကိုယ်ယုံကြည်ရာ)	| Tagged Burma, discrimination, Myanmar, racisim, U wirathu	| Leaveacomment
equality doesn’t mean justice
movies review (ရုပ်ရှင် ရည်ညွှန်း)